Injini yesigaba esisodwa: Iyini?, izici, nokunye ▷➡️ eltecnoanalista
Injini yesigaba esisodwa: kuyini?, izici, nokunye
19 Kufundwa iMin
El motor isigaba esisodwa Iveza ukubukeka kwezinto ezibonakalayo okufana nenjini yezigaba ezintathu, lezi zinjini zimpompa ukugeleza kukagesi ukuze zakhe amandla angokwenyama, lesi sifundo sifinyelelwa ngenxa yendlela yokukhanga ekhona phakathi kukazibuthe kanye nesikhungo sokulutha lapho kubekwa khona amandla. .kagesi.
Iyini iSingle Phase Motor?
Le moto iwuhlobo lwedivayisi ejikelezayo enikwa amandla yi- isici samandla ifomu likagesi, kufanelekile ukuguqula amandla kagesi kumakhenikha, umsebenzi wenziwa ngokusebenzisa umthombo wamandla wesigaba esisodwa. Engxenyeni lapho izintambo zikhona, kunezinhlobo ezimbili zezintambo, isibonelo, enye efudumele nenye engathathi hlangothi, iqukethe amandla afinyelela ku-3Kw.
Inenye i-voltage, isekethe yayo inezintambo ezimbili kanti i-current edlula kuzo iyafana.
Le modeli yemoto kagesi ingasebenza ngamandla aqondile kanye namanje ashintshayo, iyafana nemotho yesikali yamanje engapheli, kodwa inezinguquko ezihlukene.
Mayelana nalezi zinguquko sine-polar nuclei kanye nezifunda eziningi ze-hypnotic, ezakhiwe ngamashidi ensimbi ahlukene, ngokunciphisa konke ukulahlekelwa kwamandla okubangelwa ukugeleza okungenamsebenzi, ukuhlukahluka kwe-flux magnetic lapho kufakwa inethiwekhi yamanje eshintshanayo.
Lapho kukhona inani elincane lokuphenduka ku-inductor, bayakwazi ukungagcwalisi isikhungo sabo sokukhanga, ukuze bakhulise ukuqina kwemisinga ngakho-ke injini ingathuthukisa isici sayo samandla.
Umsebenzi we-motor yesigaba esisodwa ufana nowokuhamba kwezigaba ezintathu, njengoba zombili zikhiqiza amandla emishini ngamandla kagesi, zisebenzisa isisekelo sokukhanga phakathi kukazibuthe kanye nesikhungo se-hypnotic lapho ukugeleza kukagesi kufakwa khona.
Kodwa-ke, i-stator iphethe ukwamukela i-alternating current kusukela ngaphandle lapho amakhoyili akhiwa khona, ku-rotor izinsimbi zensimbi ezisebenza njengeziqondiso lapho ugesi udlula khona.
Ku-stator, ngenxa yesenzo samanje sesigaba esisodwa, kwakhiwa umphelelisi we-hypnotic obangela amandla e-voltage angeniswa kuma-rotor bars. Le migoqo ibekwe ngendlela yeluphu lapho yenza khona amandla angokomzimba eyakhelwe wona.
I-Phonophase Motor Characteristics
Lezi zakhiwo zibaluleke kakhulu lapho kunqunywa uhlobo lwe-MEM lapho uzisebenzisa, kuzosungulwa lapho ukufakwa kuqala khona, indlela yokulungisa, ukunikezwa kwamandla, kanye nendlela yokukhipha isiqondiso sikagesi, isifunda somyalo, ukulawula kanye isivikelo phakathi kwabanye. Sichaza kancane lezi zakhiwo ngalesi sikhathi.
Izici zokwakha imishini
Izinga lokuphepha komshini
Indlela yokufaka umoya noma yokupholisa
Izinhlobo ezishisayo ze-insulation
Ukulungisa umfanekiso (isisekelo noma i-flange)
Izici zikagesi ezizisholo
Ikalwe kanye ne-impulse current
Impulse kanye nezingxenye zokuthi
Yiziphi izingxenye ze-Single Phase Motor?
Lolu hlobo lwenjini luqukethe amamodeli amaningana wezinto ezibalulekile, esingabala kuzo okulandelayo:
Lokhu kwaziwa njengengxenye ebalulekile yenjini, yakhiwe isikhungo samashidi ensimbi phezu kwawo kukhona izimbobo ezithile, ucingo lwethusi olubhekele ukwenza umsebenzi kanti enye ibambela.
Yingxenye ejikelezayo ku-motor yesigaba esisodwa, ngenxa yale nsimu ye-hypnotic ekhiqizwa yi-stator, lokhu kwenziwa ibha, lokhu kufeza umsebenzi wokuhlanganisa lawo mandla omzimba, lapho futhi ehamba ngaphezu kwesikhungo se-hypnotic, kukhona futhi imishayo ye-aluminium ehlukahlukene ebizwa ngokuthi i-squirrel.
Lezi ezinye izihlangu ezihlala zinamathele ku-façade ye-stator ngokusebenzisa ezinye izikulufi, umsebenzi wazo oyinhloko ukugcina ibha ye-rotor isesimweni esinqunyiwe. Ngalinye lalawa mapuleti ligcina imbobo emaphakathi ehloselwe ukufaka i-bearing, ibhola noma ukuvuza, lapho i-rotor shaft iphumula khona.
Bafeza umsebenzi wokugcina isisindo se-rotor, bayisekele enkabeni yangaphakathi ye-stator, okwenza kube lula ukuthi i-rotor ijikeleze ngokungqubuzana okuncane, ukuvimbela i-rotor ukuthi ingangqubuzani ne-stator.
Lokhu kuhamba phezulu ngaphakathi komshini, umsebenzi wawo ukunqamula ukushaqeka komfutho, kuyilapho i-rotor ikwazi ukuba nesivinini esanele, imodeli evamile yakhiwe izingcezu ezimbili eziyinhloko, eyodwa ezinzile kanye nenye ejikelezayo. .
Ingxenye ezinzile itholakala ngaphezu kwanoma yini enye ingxenye emaphakathi yokuvikela ngaphambili komshini, iqukethe ukuxhumana okubili ngakho-ke umsebenzi wayo ufana ne-lever enomhlahlandlela owodwa, emishinini ehlukahlukene eguquliwe ingxenye ezinzile ye-lever itholakala. ingxenye emaphakathi yomzimba we-stator.
Ngakolunye uhlangothi, ingxenye ejikelezayo ihamba phezu kwe-rotor, inomsebenzi we-lever lapho i-rotor iphumule noma ijikeleza kancane kakhulu, ingcindezi etholakala engxenyeni yeselula yalesi shintsho igcinwa ivaliwe ukungqubuzana ingxenye elungisiwe.
Lapho i-rotor ifinyelela ku-80% wejubane layo lokusetshenziswa, ingxenye ejikelezayo ihlala iphumule ngoba icindezela othintana nabo abashiwo, ibavumela ukuba bahlukane, lapho ingxenye yomfutho inqanyulwa ngokuzumayo engxenyeni yamandla.
Ikheji noma ikheji le-squirrel elijikajikayo
Yakhiwe uhlobo lwezinduku zethusi, ezibekwe ngaphakathi kwezimbobo zesethi yama-blade ajikelezayo, lezi zinduku zinamathiselwe nhlangothi zombili ngezindandatho zethusi eziqhumayo ezivala ukuqina kwamandla. Amamotho amaningi esigaba esihlukanisayo aqukethe into ezungezayo enezinduku namasongo e-aluminium asethwe engxenyeni eyodwa.
I-spool yokusebenza noma umgcini lona ubakaki womhlahlandlela wethusi oqhumayo, obekwe ngaphansi kwezimbobo ze-stator.
I-Ipulse noma i-substitute spool lena ukusekelwa komhlahlandlela wethusi omuhle we-insulated, utholakala ngaphezu kwesifunda sesigaba somsebenzi. Lezi zifunda ezimbili ezingazodwa zihlangene ngokufana.
Izinhlobo zeSingle Phase Motors
Ngokungafani nemishini emithathu, i-monophasic igcina i-stator ngokubukeka kwensimu ye-hypnotic ezinzile edonsayo engakwazi ukucunula ama-impulses amabili ngokwayo. Ngesikhathi sokubangela le pair of impulses, injini icela i-casing esikhundleni.
Lena enye yezindlela ezimbalwa ezenzelwe ukuqalisa isigaba esisodwa samadrayivu asynchronous. Lokhu kusekelwe ekushintsheni umfutho womshini wesigaba esisodwa ngowodwa onamaza kagesi amabili abizwa ngokuthi i-biphasic (engaqala ukusebenza ngokwawo).
I-motor iqukethe amasekhethi kagesi amabili, eyinhloko kanye nendawo; eceleni, iqukethe iswishi ye-centrifugal eyakhelwe ngaphakathi umsebenzi wayo ukuhlukanisa ukusonga esikhundleni ngemva kokuba injini iqale. Ngaphandle kwale motor yomjikelezo osethathe umhlalaphansi kunezinye izindlela izinjini zesigaba esisodwa ezingasebenza njengombuzo wamamotho okufaka ibhethri.
Isibopho senjini yokukhiqiza umjikelezo wokuhlukanisa sichazwa kanje: kunezinhlobo ezahlukene zezindawo, kusukela ezimbonini kuya endaweni yokuhlala, lapho inhlangano kagesi inikeza kuphela ukuhweba kwesigaba esisodwa se-ac (alternating current) .
Kulokhu, kuzo zonke izindawo kunesidingo esibanzi sama-motor amancane anesibopho sokusebenza ngokusatshalaliswa kwesigaba esisodwa ukuze akwazi ukukhulisa izinto ezisetshenziswayo ezihlukene, iningi lazo zonke iziqandisi, kulezi zindlela zokushintshwa kwe-centrifugal ezaziwa kakhulu zisetshenziswa, uma kungenjalo futhi kungasetshenziswa amaswishi kazibuthe, anekhoyili exhunywe emgqeni nokujikajika okuyinhloko.
Lapho umfutho wamanje kulokhu uphakeme kakhulu, inkinobho ivala ukuthintana ojoyina umqhubi wesekethe kagesi nge-impulse noma esikhundleni, njengoba ithola isivinini, ukuqina kuzokwehla, kuze kube yilapho ikhoyili yokushintsha iyama inalokho kuxhumana. ivaliwe ukuze kamuva ikwazi ukunqamula isekethe yokusheshisa kagesi.
Ngakolunye uhlangothi, kunenye indlela yokwenza lesi senzo, uqala ngokusebenzisa i-PTC resistor ngokuhambisana nesifunda sokuqala, ngesikhathi sokujoyina injini amandla ahleliwe abangela inzuzo ephansi, ejikeleza ngamandla amakhulu. ngokusebenzisa isifunda sokuqala, lokhu kugeleza kancane kancane kushisa up wathi magnitude, ngakho inani layo landa kakhulu, okubangela ukwehla ngamandla kuze kube kuncane kakhulu.
Hlukanisa Isigaba nge-Capacitor Start
Lezi zinhlobo zamamotho okugeleza ashintshashintshayo esigaba esisodwa zigcina izinga elisuka ezingxenyeni ze-HP lifike ku-15 HP, amamotho asetshenziswa kakhulu anezinhlelo eziningi zemodeli yesigaba esisodwa yilawo aphethe ukunikeza amandla emishini, njengoba kanye nezitsha ezinjengama-drill, imishini yokugunda utshani, amaphampu ezimoto, phakathi kwezinye eziningi.
Lo mshini unokufana ngesakhiwo nalowo womjikelezo wokuhlukaniswa, ngaphandle kokuthi uxhunywe ne-chain capacitor nomfutho wayo ofanele.
Ama-motor i-impulse anesitoreji sikagesi nawo enziwe njengalawo omjikelezo wokuhlukanisa, ne-circuit kagesi yomsebenzi kanye nokuqala, kodwa i-motor iqukethe ibhethri (i-capacitor), ekwazi ukugcina i-torque enkulu ye-impulses.
I-capacitor ixhunywe ochungechungeni nge-electrical impulse circuit kanye ne-centrifugal lever.
Kusuka ku-Short Circuit noma ku-Shadow Loop
Lezi yizinhlobo zamamotho aqukethe amandla amancane, ngokuvamile angu-300w, ngakho ukusetshenziswa kwawo kukhawulelwe impela. Isetshenziswa lapho izimo zamandla zizincane, njengamawashi, okomisa izinwele, abalandeli abancane, phakathi kwabanye abaningi.
Le moto ingasebenza ngokwayo ngokwayo, lokhu kufinyelelwa ngenxa yomphumela owenziwe yi-short-circuit noma i-impulse loops noma ama-loops omthunzi, lezi ziyizindandatho zethusi ezilula. Uhlelo lusebenza lapho lezi zigxobo ze-stator zihlukaniswa izingxenye ezimbili ezihlukene, kwenye yalezi zingxenye ikhoyili ibekwe.
Zonke lezi zinjini ziqukethe izigxobo ezibukhali ku-stator kanye ne-squirrel-cage rotor.
Lezi zinhlobo zezimoto zihluke kakhulu njengoba injini igcina ugesi oqhubekayo, ngaphandle kwalezi zinhlobo ezahlukene zama-motor ezinobukhulu obufanayo njengoba kwenzeka ngama-motor angena, ahlanganisiwe kanye nama-collector.
Lawa ma-motor akhiwe isekethe kagesi yesibili, lawa masekhethi kagesi axhunywe ku-alternating current enezigaba ezintathu.
Lolu hlobo lwezimoto lusetshenziswa ngamandla amakhulu njengoba zingamamotho ezimboni adinga inani elikhulu lamanje ukuze akwazi ukusebenza, anamasekhethi adidiyelwe ahlanganiswe ukuze kuthuthukiswe umthamo wamanje ukuze angakhiqizi amaconsi aqinile kugesi.
Lawa mamodeli agcina ukujikeleza kwe-shaft efana nemvamisa yenkambo yokudla okunomsoco, indlela yokuzungeza ifana ncamashi nenani eligcwele lemijikelezo yokugeleza okuphindaphindayo.
Izinhlobo ezithile zamamotho adidiyelwe yiwo adumile "ama-hysteresis motors", asetshenziswa kumawashi ayisitophuwashi.
Le modeli yomshini isetshenziselwa ukuphatha ukumelana okuphansi, labo abangaphansi kuka-300 w, isetshenziswa kaningi kumishini yokungenisa umoya emincane yasekhaya.
Umehluko phakathi kwe-Single-Phase kanye ne-Three-Phase Motor
Kukhona ukungalingani phakathi kwesigaba esisodwa kanye nesigaba sesithathu samamotho, sizokwethula ezinye zazo ngezansi:
I-Single Phase Motor
I-motor yesigaba esisodwa isebenza ngomthombo wamandla wesigaba esisodwa, esakhiweni sezintambo ze-motor yesigaba esisodwa, izinhlobo ezimbili zezintambo zingatholakala: enye efudumele futhi enye engachazwanga.
Aqukethe amandla afika ku-3KW, kumodi yawo yesigaba esisodwa, amandla okudla okunomsoco ashintsha ngokufanele, angakwazi futhi ukuphakelwa phakathi komjikelezo owodwa nongapheli.
Aphelele ukuthi abe khona ezindlini, emahhovisi, ezinkampanini ezincane okungezona ezokukhiqiza, angethulwa ngokwehlukana kwamanye amafekthri amancane kwazise anazo zonke izidingo zamandla kulezi zindawo. Ukusetshenziswa kwayo ezindaweni ezihlukahlukene ezinkulu akuvamile kakhulu.
Ayibangeli inkambu ye-hypnotic ejikelezayo njengoba ingakha enye inkambu kuphela. Lokhu kusho ukuthi zihamba ngendlela eyodwa bese zikwenza ngokuphambene, nokho, njengoba zingabangeli noma iyiphi insimu ezungezayo, azikwazi ukuqhubekela phambili ngokwazo njengoba zidinga i-capacitor ukuze zikwazi ukwenza lokho okushiwoyo.
Inengxenye ezinzile (i-stator) nengxenye yeselula (i-rotor), umsebenzi walo mshini wesigaba esisodwa ungaba nomsindo futhi nokudlidliza okuthile.
Ukusetshenziswa kwayo kungaba okuhlukahlukene: kumakhaza ezentengiselwano nasekhaya, ukungena komoya, ukufudumeza, amaphampu amanzi, ama-compressor komoya, ngaphezu kwanoma yini ehlobene nokufuduka komoya.
Kulula ukukhanda nokunakekela kanye nenani elithengeka kakhulu.
Injini enezigaba ezintathu
El Injini enezigaba ezintathu Isebenza ngomthombo wamandla wezigaba ezintathu. Iphushwa imisinga emithathu eshintshanayo yefrikhwensi efanayo, ekwazi ukufinyelela amanani awo aphezulu ngendlela ehlukahlukene. Lokhu kubangela ukudluliswa kwamandla okuqhubekayo phakathi nomjikelezo ngamunye wamanje, okwenza kube nokwenzeka ukubangela inkambu ejikelezayo yokulutha emotweni. Ingasebenza yodwa.
Kumodeli yezigaba ezintathu, umsebenzi wayo usekelwe ekukhiqizeni, ekudluliseni nasekusabalaliseni amandla.
Aqukethe amandla afika ku-300 KW kanye nesivinini esiphakathi kuka-900 no-3600 RPM.
Isetshenziswa kakhulu emkhakheni wezimboni njengoba igcina amandla aphezulu angu-150% ngaphezu kwenjini yesigaba esisodwa. Kulokhu, amandla kagesi ayindlela evamile esetshenziswa izinhlangano zikagesi emhlabeni wonke ngoba zikhiqiza amandla amaningi.
Amandla kagesi ezigaba ezintathu ashibhile njengoba zisebenzisa amathuluzi omhlahlandlela ambalwa ukuthutha amandla. Lokhu kusho ukuthi kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
Iqukethe indawo ezinzile (stator) kanye zone mobile (rotor).
Inokunyakaza okugxilile kune-motor yesigaba esisodwa. Ayibangeli ukuyaluza futhi inomsindo omncane. Izindleko zayo ngokuvamile ziphakeme kancane
Kungani ukhetha I-Single Phase Motor?
Kunezizathu ezahlukene ezenza kube lula ukukhetha lezi zinhlobo zama-motor ezizosetshenziswa ekhaya, ezentengiselwano noma ezimbonini, sizochaza ezinye zazo.
Zigcina ukuguquguquka okuphelele, zihlangene zifana nezinye izinjini, ukugeleza kudlula izintambo zalena enobukhulu obuncane, njengoba uhlobo lwe-voltage equkethe luphezulu, lokhu kwenza umshayeli aphathe kalula.
Ukuba khona kobukhulu obuncane bamanje kuzintambo ze-conductor kuyinzuzo eyodwa eyengeziwe, okwamanje ukuthi ukusizakala kokudluliswa kukhula, lokhu kwenza iyunithi yokukhiqiza okuphezulu ibonakale.
Imfuneko encane yesiteshi
Ukubola kokulahlekelwa kwe-I2R kuyasiza njengoba kuvumela ibanga phakathi kweziteshi ezingaphansi zikagesi ukuthi likhuphuke, lokhu kusho ukuthi indawo efanayo ingashintshwa ngokuphelele ngokusebenzisa inombolo encane yeziteshi.
Ngendlela efanayo, lokhu kulungiselelwa kungathuthukisa ukufakwa kukagesi eduze kochungechunge lwe-voltage ephezulu, lokhu kunciphisa izindleko zayo yonke inqubo yokudlulisa.
Ihambisana nezinhlelo zokusebenza zangaphandle
Izinjini zesigaba esisodwa yizo ezisetshenziselwa imisebenzi yangaphandle. Ngoba amelana namanzi kanye nothuli.
Isikhathi esiningi amamotho avalelwe ngokuphelele ahlinzekwa ngesiphephetha-moya ukuze asize enqubweni yokupholisa, aphinde asize ekusetshenzisweni kalula ezindaweni ezingezinhle zemvelo.
Kulula kakhulu ukuwenza ngezindleko ezingabizi uma uqhathanisa nemishini eyahlukene yalolu hlobo.
Izinhlobo Zamanje ku-Single-Phase Motors
Ama-motor kagesi angaqukatha amamodeli ahlukene wamanje noma amandla, okuyizinto eziyinhloko: i-nominal current, i-free current, i-impulse current kanye ne-rotor current ekhiyiwe.
Emotweni, ukukalwa kwamandla okuzisholo kusekelwe enanini lamanje imoto ezolisebenzisa ezimweni ezivamile zokugijima.
Lona wamanje ukuthi injini izodla uma ingekho ukusebenza nomthwalo, kungenzeka ukuthi i-40% kuya ku-50% yamanje yamanje.
Wonke ama-galvanic motors ukuze asebenze adla amandla amanje ayinsalela, amakhulu kunowamanje wawo ojwayelekile, ophindwe izikhathi ezine kuya kweziyisishiyagalombili ukuphakama.
i-rotor yamanje evaliwe
Lona wamanje omkhulu kunayo yonke injini esekelayo lapho i-rotor yayo imisiwe ngokuphelele.
Ukusebenza kweSigaba Esisodwa Motor
Ukukhiqizwa kwemoto phakathi kwamandla awusizo kubonakala ku-axis yayo, ngamanye amazwi, isilinganiso se-amplitude edingwa yi-motor ukuguqula amandla kagesi abe amandla angokwenyama, endleleni yoshintsho kukhona ukuphambuka, ngakho-ke. kwaziwa njengokukhiqiza kwenjini kusuka ku-(1).
Izifunda kanye Nezinhlelo Zokuqala
Ukuze umshini wesigaba esisodwa usebenze, kufanele kukhunjulwe ukuthi kukhona okuhambisanayo kokuphepha kwesekethe, isibonelo salokhu kungaba: i-omnipolar magneto-thermal lever kanye nokunye. ukudluliselwa okunesikhathi izinsalela ezikwazi ukuvimbela ukushisisa okuningi kwenjini.
Imizila yama-motor yenziwe ngezixhumi zomfutho nokulawula kwe-motor, ama-motor circuits ahlukaniswe kabili, i-force noma i-power circuit kanye nomyalo kanye ne-signal circuit. Lesi sakamuva saziwa nangokuthi isizinda.
Kumjikelezo wokulawula, amazinga aphansi emisinga nama-voltage (amasignali) asetshenziswa ngaphezu kwanoma yini enye ngamandla noma amandla ngokuphambene, ngalawa mazinga aphezulu emisinga nama-voltage alawulwa.
Amasekhethi okulawula namasignali asebenzisa izimpawu ezihambisana nemiyalo yokulawula yamakhoyili, izilawuli nezinye izinto eziphathwayo ngogesi. Lokhu kumelela indlela yomsebenzi ekufakeni noma ekuzisebenzeleni.
Siyini isivinini salezi zinjini?
Uma unokuqhubeka okukhulu kwe-alternating current izoba nesivinini esingcono, uma unenombolo enkulu yezigxobo izoba nejubane eliphansi, ngale ndlela umshini onesivinini esiphezulu yilowo onama-poles angu-2.
Ezwekazini laseYurophu ukuqhubeka kokunikezwa kwesigaba esisodwa kungu-40 Hz (hertz) kuyilapho eMelika kungu-70 Hz.
Isivinini esijwayelekile salezi zinjini ku-60Hz siyahluka phakathi kuka-1.400 rpm no-4000 rpm, konke kuncike ekutheni une-pole motor engu-2 noma 4, kukhona ama-voltages ajwayelekile angu-250 V phakathi kwesigaba nokungathathi hlangothi.
Lolu hlobo lwejubane lwaziwa ngokuthi i-synchronism, lokhu kusho ukuthi yinkundla ejikelezayo ye-stator, ngenxa yalokhu ijubane langempela le-rotor lincane kakhulu, lawa ama-asynchronous motors futhi kukhona ukushelela okubangelwa umthwalo olahlekile, ngaphezulu noma ngaphansi kwalokho bekungaba ngu-5%.
Kungani isivinini sincike enanini lezigxobo?
Ukuqala injini yezigxobo ezi-2, lapho ibona umjikelezo wengxenye yamanje eshintshashintshayo, yenza ukuheha okubenza bajike ukuze bavale sonke isikhala esigcwaliswa isigxobo esisodwa, ngesikhathi lapho kuvela enye ingxenye yomjikelezo, izokwenza. hamba enye isigxobo, ngaleyo ndlela uqedele ukujika okuphelele kumjikelezo ngamunye
Uma i-alternating current iyimijikelezo engama-60 ngomzuzwana, injini izonikeza okungenani ukuzungezisa okungu-70 ngomzuzwana (ukuzungeza okungu-4000 ngomzuzu), enenjini engu-6-pole enomjikelezo owodwa, ikwazi ukunikeza isigamu ukujika, ngoba izigxobo izothatha ingxenye yesithupha ye-stator, ezodinga imijikelezo engu-6 uhhafu ukuze iqedele ukuzungezisa okukodwa okugcwele.
Kungani bengaqali bodwa?
Uma umjikelezo kagesi wesigaba esisodwa ubekwa futhi wethulwa ku-voltage eshintshanayo, inkambu yokulutha efinyelelwayo iwumkhakha ohlukile ozinzile, lokhu kusho ukuthi yonke impahla yengqamuzana iyashintsha ngokuqhubekayo ngokushintshana, okukhuphuka futhi kwehle nge-polarity ngayinye ngendlela efanayo. indlela eya kumfutho wamanje oshintshanayo.
Konke lokhu kwenziwa ku-eksisi yakhona ngakho akuyona inkambu ejikelezayo ye-hypnotic.
Le nkambu ye-stator ixhunywe esigabeni esingakhethi (isigaba esisodwa), noma ingaguquki, lapho yonke imigqa yayo yensimu inqanyuliwe, izinduku ze-rotor zikhiqiza amandla kagesi aqhutshwa kuzo, okuthi, ngokuba ku-current-circuit currents. zakhiwe ezindongeni ze-rotor ngakho-ke zibangela insimu yamagnetic ezungezile ngamandla afanayo ku-rotor.
Ukuphazamiseka kwenzeka lapho lezi zipheya zamandla zisendleleni eyodwa kanti enye ingxenye ibheke ngakolunye uhlangothi (lapho i-current in the stator ihluka nge-polarity), ngaleyo ndlela ivimbele ukujikeleza kwe-rotor. Ayiqukethe i-duet yokuqala njengoba amapheya womabili ayasuswa.
Ngaphansi kwalezi zimo, uma i-rotor iphushwa ngesandla kwenye yezindlela ezimbili, kungenzeka ukuhlanganisa i-axis ye-rotor magnetic field kuleso siqondiso, i-motor izoqala ukujikeleza ngokwayo ize ifinyelele isivinini sayo sokuzisholo. I-motor izobe ijikela ohlangothini olufanayo nasekuqaleni kuze kube yilapho amandla esuswa.
Indlela yokubona i-axiliary winding eyinhloko?
Lokhu kulula kakhulu njengoba uma amatheminali amabili noma izintambo zinokuphikisana ziyisekethe kagesi, ngokuba nenye yalezi ezimbili uzokwazi ukuthi iyiphi enokumelana okuphezulu, uma kunjalo iyona eyinhloko, kuyilapho enye izoba esikhundleni. , kufanele uhlale ukhumbula lapho kukhona Izingozi Ugesi njengoba ngesikhathi sokuxhumana nogesi akunakugwemeka ukuthi lezi zivele.
¿Kwakungubani isazi sefiziksi saseBrithani nosokhemisi ababebhekwa njengoyise wemoto yesigaba esisodwa?
UMichael Faraday wayaziwa ngokuba ngumdali we-electrochemistry kanye ne-electromagnetism.
Ngonyaka we-1821 ngemva kokwembulwa kwemodeli kazibuthe yisazi sesayensi yemvelo saseDenmark uHans Christian Ørsted, uDavy kanye nososayensi waseBrithani uWilliam Hyde Wollaston banquma ukugxila ekusebenzeni kwenjini okwaba ukukhungatheka okuphelele.
UFaraday, ngemva kokucabanga ngale nkinga ngala madoda amabili, wema waqina, waqhubeka esebenza emgomweni wakhe, futhi wakwazi ukwenza izinto ezimbili azibiza ngokuthi "i-electromagnetic rotation". Enye yalezi manje ibizwa ngokuthi i-homopolar motor.
Imishini eyinhloko kwakuyizinto zikagesi ezilula, lezi zazisetshenziselwa ukwenza izivivinyo ezihlukahlukene ezenziwa indela yaseScottish Benedictine u-Andrew Gordon kanye nomdali waseMelika uBenjamin Franklin ngonyaka we-1740.
Ukuqala kwabo kwembulwa yiNgisi uHenry Cavendish e, nakuba kungazange kuvele, lesi simo sasungulwa ngumFulentshi uCharles-Augustin de Coulomb e, owasenza saziwe.
I-Electric Circuits Simulator - Izinketho ezinhle kakhulu
Izinhlobo ze-Electric Motors Ziyini?